Pakati pevatengesi vakanakisa ve2019. 6 ingano uye asiri-ngano mabhuku | Zvazvino Zvinyorwa
Pakati pevatengesi vakanakisa ve2019. 6 ngano uye asiri-ngano mabhuku
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Bvunzo, Vanyori, Mabhuku, Vechidiki Mabhuku, Novela, Nhetembo
2019 inopera. Bata mwero wemabhuku anotengesa zvakanyanya uye urwu runyorwa haruzove rwakasiyana zvakanyanya pari zvino Izvi ndizvo 6 dzenhema uye asiri-ekunyepedzera mazita zvakakosha zvinotora nzvimbo dzepamusoro mukupedzisira kwekupedzisira kwegore rino. Mune ngano ndivo Planet Mubairo achangopfuura, iyo nhetembo isingakundike yazvino genre phenomenon uye a Kazhinji mutengesi. Uye in isiri ngano nyaya dzemunhu wekutanga nezve zvakapfuura nezvazvino zviitiko pamwe neakakurumbira ezvematongerwo enyika uye ehupfumi rondedzero. Ngatione…
1 Pakati pezvakanakisa zvinotengesa ngano
1.1 Zvisingachinjiki - Mipiro
2 Pakati pevatengesi vakanyanya veisiri-ngano
2.1 Kunyemwerera kunyangwe zvichikubhadhara - Ángela Mármol
2.2 Iko Kushatirwa uye Iwo Mavara - Greater Wyoming
2.3 Capital uye Pfungwa - Thomas Piketty
2.3.1 Mamwe mazita ekunyepedzera uye asiri emanyepo
Pakati pezvakanakisa zvinotengesa ngano
Zvisingagumi - Zvipiriso
Kana José A. Gómez Iglesias, iyo inodzokera kumusoro kwepamusoro pevatengesi vepamusoro rondedzero neayo mabhuku enhetembo iyo inobatanidza ndima, pfungwa uye nhetembo prose mukubudirira kwake mutsara. Misoro yakatanhamara senge irwo rudo rusina mugumo, hupenyu sevakaroora, kushushikana, kusuwa kwemoyo, hushamwari ... Uye zviroto zvepasirose nyika irwo rudo irworwo nezvose.
High Terra - Javier Cercas
Ichangopfuura Planet Mubairo niche yakaitwa mune urwu runyorwa rwevanotengesa zvakanyanya vane rondedzero ye mhosva iyo inozunza nzvimbo ine rugare yeTerra Alta. Melchor Marin, mupurisa wechidiki, muverengi mukuru uye ine rima rapfuura, ndiye achabata nyaya yacho. Asi izvo zvakapfuura zvinogara zvichidzoka.
Perez-Reverte ari yakatarwa yemabhuku anotengesa zvakanyanya yegore uye iyi 2019 yaisa maviri: Nhoroondo yeSpain, kuunganidzwa kwe zvinyorwa yakanyorerwa kutaura iyo nyaya nenzira yavo chaiyo nzira; uye izvi Sidiake zvakare ongororo chaiyo yemunhu hunhu uye gamba saka redu uye rinokakavara munguva dzino se Rodrigo Díaz weVivar, El Cid.
Pakati pevatengesi vakanyanya veisiri-ngano
Kunyemwerera kunyange zvichikubhadhara - Angela Marble
Munhu wekutanga nhoroondo yezve simba iri kubva kuTikTok uyo anotaura nezve ruzivo rwake se nyajambwa wekushungurudzwa. Inotarisirwa kune muverengi wechidiki na kudana kwekuzvibatsira, mubhuku rino unogona kudzidza ku ziva uye urwise kushungurudzwa ikoko chikoro. Zvese kuti uwane zvinhu zvakawanda zvakakosha sekusarega, kuzvivimba uye kuve munhu ari nani. Kune izvi, iwe zvakare unofanirwa kuve nerubatsiro rwevamwe, nekuti panguva imwe chete kukwanisa kupa ruoko kune avo vanotambura.
Hasha uye mavara - Kukura Kwakakura
Midhiya uye mutambi anozivikanwa, muratidziri uye munyori anotsvedza pakati pevanotengesa zvakanyanya neizvi nhoroondo mumunhu wekutanga, uye nenzira yake, nezve hupenyu hwake. Kana pane kudaro, nezve nhoroondo uye yemagariro mamiriro akapoterera. Chiitwa pakurangarira nechinhu chikuru chekuratidzira chaakatoratidzira mune kumwe kubudirira kunyora, Hatina kupenga.
La Kuchinja, kupokana kuri pakati peSpain ye hudzvanyiriri uye uya akatanga kumuka kuna modernity of the 80s, pamwe ne zvinodhaka, the Amor, mumhanzi. Zvese yakasanganiswa nezvematongerwo enyika uye kurwa yekutsvagawo yake nyanzvi nzvimbo.
Capital uye ideology - Thomas Piketty
Ndatowana kubudirira kukuru ne basa rapfuura, Capital muzana ramakumi maviri nemakumi maviri. Izvo zvakatendera Thomas Piketty kuenderera mberi nekuwana mari uye nhoroondo zviwanikwa izvo kusvika parizvino hurumende zhinji uye dzakasiyana dzakaramba kupa. Saka neiyo data kuvaka nhoroondo yezvehupfumi, yemagariro, yehungwaru uye yezvematongerwo enyika yekusaenzana kuri kuitika. Zvese izvi zvichipfuura nemumatunhu uye nharaunda dzevaranda kune vemazuvano hypercapitalists.
Mhedziso yake: izvo kusaenzana haisi yezvehupfumi kana tekinoroji, asi mafungiro uye zvematongerwo enyika. Muchokwadi, tambo yakajairika munhoroondo yenzanga dzevanhu haisi iyo kurwisana yemakirasi, anodzivirirwa nevanoongorora dzidziso saMarx naEngels, asi iyo yemafungiro. Asi pakupedzisira anogutsikana kuti zvinokwanisika kukunda capitalism uye kuzadzisa iro rakaringana nzanga.
Mamwe mazita ekunyepedzera uye asiri emanyepo
Ivo zvakare vanomira pakati pevatengesi vepamusoro veisiri-ngano Vanhu vakatengeswa de Paul preston; uye ngano, Chiso chekuchamhembe chemoyo, kubva kune imwe tsika, Dolores Round.
Kwayaka: Imba yeBhuku
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Pakati pevatengesi vakanakisa ve2019. 6 ngano uye asiri-ngano mabhuku
2020. Dzimwe nhau dzekunyora dzaNdira wegore idzva
Kuyeuka kwakajairika kuchinjika kwemabhuku echinyakare